Neymar oo leh mustaqbal ka iftiin badan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo…(EEG TIRO KOOBKAN) – Damqo
Neymar oo leh mustaqbal ka iftiin badan Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo…(EEG TIRO KOOBKAN)
Neymar ayaa 25-jirsaday wuxuuna ku raaxeysanayaa waayo ciyaareed oo ka qurux badan xiddigaha ugu waa wayn kubbada cagta waqtigan ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo markii ay da’daa oo kale jireen.
Wiilka kulankiisii ugu horeeyay u saftay Santos isagoo 17-jir ah ayaa dhaliyay 280-gool heerka kooxaha iyo midka xulka, iyadoo uu Messi dhaliyay 279-gool halka uu Cristiano Ronaldo dhaliyay 162-gool markii uu joogay da’da Neymar oo kale.
Laakiin marka la fiiriyo saamiga uu kalankiiba gool ku dhaliyo waxaa Neymar ka fiican
Messi maadaama uu 280-gool uu ku dhaliyay 468-kulan halka kabtanka xulka Argentina uu 279-ka gool uu ku dhaliyay 410-kulan.
Iyadoo ay jirto inuu Neymar soo qaatay 8-sano aan innaba caadi ahayn misane waligii kuma guuleysan abaal marinta Ballon d’Or halka Lionel Messi iyo Ronaldo ay abaal marintan kala qeybsanayeen tan iyo wixii ka dambeeyay 2007 kolkaa uu ku guuleystay Kaka.
Previous AKHRISO XOG: ABDUQADIR COSOBLE OO LAKULMAY XILDHIBANADA LABADA AQAL
Next Jesse Lingard oo shaaca ka qaaday xiddiga xilli hore yimaada tababarka Man United iyo midka had iyo jeer ka soo daaha